Nagu saabsan - Hebei Yuniu Maroosinka Warshadaha Co., Ltd.
Hebei Yuniu Maroosinka Warshadaha Co., Ltd, oo la aasaasay sanadkii 2012, waa soo saare muraayadaha xirfadeed ee waqooyiga Shiinaha, kaas oo ku yaal Gobolka Guangzong, Xingtai City, Gobolka Hebei.China. Maaddaama ay tahay shirkad farsamo-yaqaan ah, inta badan waxay soo saartaa oo ay u qaybisaa noocyo badan oo ah noocyada muraayadaha fayraska 'E', sida wareejinta marooyinka, fiilooyinka la jarjaray, marooyinka xarig goynta ah, maaddada muraayadaha ee la gashado, roogga irbadda, maro maaddada 'fiberglass' iyo wixii la mid ah. xagga warshadaha dhismaha, warshadaha baabuurta, diyaaradda iyo aagga dhismaha markabka, kiimikada iyo warshadaha kiimikada, korantada iyo elektaroniga, isboortiga iyo xilliyada firaaqada, aagga soo baxaya ee ilaalinta deegaanka sida tamarta dabaysha, isku darka tuubbooyin kala duwan iyo qalabka kuleylka kuleylka. alaabtu waxay la jaan qaadayaan weelka kala duwan, sida EP / UP / VE / PA iyo wixii la mid ah.
Kaabayaashayaga qalabaysan ayaa muhiim u ah koritaanka iyo ballaarinta howlahayaga ganacsi. Xarumaha casriga ah iyo kuwa casriga ahi waxay naga caawinayaan inaanu si hufan u horumarinno Alaabada Fibre-Muraayadaha ah. Kaabayaasheena waxay ku baahsan yihiin aag aad u balaaran waxaana loo qeybiyay qeybta wax soosaarka, qeybta tayada iyo qeybta wax lagu keydiyo.
Qeybteena wax soo saar waxay ku qalabeysan yihiin mashiinno ujeedo gaar ah leh iyo qalab iyo qalab loo baahan yahay. Iyadoo la adeegsanayo mashiinadan, waxaan awood u leenahay inaan soo saarno wax soo saarkeenna tiro badan oo aan buuxino shuruudaha macaamiisheenna.
Shirkadeenu waxay leedahay waaxdeena adeegga iibka kadib iibkeenna xirfadleyda gaarka ah, alaabooyinka ayaa ku riyaaqay sharaf sare oo gudaha ah oo caan ku ah suuqa caalamiga sidoo kale.
Hadafkeenu waa in aan u adeegno soo iibsiga agabyada isku dhafan ee caalamiga ah, si aan nolosha dadka uga dhigno mid ammaan ah, jawi badan leh.
Ku soo dhawow iskaashiga ganacsiga alaabteena tayada sare leh iyo adeegga daacadda ah, si wadajir ah loogu guuleysto berrito quruxda badan!
Waxaan hubineynaa in Alaabada Fibre-Muraayadaha ay bixiyaan heerar tayo sare leh. Ilaaliyaasheena tayada waxay si joogto ah ula socdaan dhammaan marxaladda wax soo saarka si loo hubiyo tayada ugu fiican ee alaabtayada. Waxaan u hoggaansameynaa tiknoolajiyada ugu dambeysa iyo nidaamka xakamaynta tayada, kaas oo hubiya heerarka tayada iyo qeexitaannada.
Shirkaddu waxay awood u leedahay inay bixiso tayada fasalka koowaad iyo alaabada ugu muhiimsan oo leh awood buuxda oo BV, SGS iyo ISO9001.
Sidaa darteed, waad nasan kartaa si aad u hubiso tayadayada iyo adeeggayaga kaamil ah.
Tan iyo markii la aasaasay 2012, iyadoo kooxda iibka ee kaamil ah gudaha iyo dibaddaba. Waxsoosaarkeenna waxaa loo iibiyey lix iyo siddeetan dal.Waxaan hadda leenahay saamiga suuqa ee Yurub, Waqooyiga iyo Koonfurta Ameerika, Australia, Afrika, Bariga Dhexe iyo Koonfur-Bari Aasiya.
Fursad na sii, waxaanuna kugu soo celin doonaa adiga oo qanacsan.Waxaan si daacad ah u rajeyneynaa inaan kula shaqeyno gacmo-qabasho.